गायक कालिप्रसाद बाँस्कोटामाथि लाग्यो गीत चोरीको आरोप ! — SaharaPati
गायक कालिप्रसाद बाँस्कोटामाथि लाग्यो गीत चोरीको आरोप !
काठमाडौं, माघ २५ । नेपालको युट्युव ट्रेन्डिङमा तीन सातादेखि एउटा गीत चम्किरहेको छ ‘इन्स्टाको फोटो….’ । केही दिन एक नंबरमै बस्यो । आशिफ शाह र रेश्मा घिमिरे फिचरिङ्ग गरिएको यसको भिडियो पनि स्तरीय छ । यहि गीतको जबाफ दिँदै इलिना चौहानले गाइन् । यसले पनि लोकप्रियता कमारहेको छ । इलिनाको सुमधुर स्वरले साँच्चै मन्त्रमुग्ध बनाउँछ । यहि बेला फेसबुक ग्रुपमा ‘इन्स्टाको फोटो…’ प्यारोडी भाइरल भइरहेको छ । उस्तै लयमा गाइएको गीतको शब्दले भन्छ:
चोरछौ रे अझैं पनि
गाएको जस्तो गर्छौ रे तिमी
अब भन्नु नपर्ला, ‘इन्स्टाको फोटो….’लाई चोरीको आरोप लागेको छ । युट्युवमा ५० लाख भिज बटुल्नुमा यो विवादको भूमिकालाई पनि नकार्न सकिन्न । चोरी पनि हिन्दी र अंग्रेजी होइन, फ्रेन्चबाट । गीत हो, कार्लाब्रुनीको ‘केल्क्याँ….’ । यसलाई अंग्रेजीमा सबटाईटल गरिएको भिडियो युट्युवमा खुब खोजी हुन थालेको छ । त्यसमा एउटा लाईन छ, ‘यु स्टिल लभ्ड मी’ । अनी ‘इन्स्टाको गीत…’ मा पनि गायकले दोहोर्याइ रहन्छन्, ‘अझैं मलाई माया गर्छेउ रे ।’ अर्थात्, गीतको लय मात्र होइन, ‘थिम’ पनि मिल्दोजुल्दो छ ।
अब भनिहालौं, ‘इन्स्टाको फोटो…’को गायक, संगीतकार र गीतकार अरु कोही नभएर कालीप्रसाद बाँस्कोटा हुन् । जो फिल्म संगीत र पाश्र्व गायनमा केहि समययता शिखरमा छन् । तर यसपटकको चोरीको लफडाले बाँस्कोटाको विश्वसनियता र साखमाथि कठोर प्रश्न खडा गरेको छ । इटालियन–फ्रेन्स कार्ला ब्रुनी गायिकामात्र होइन, ख्यातिप्राप्त गीत लेखक र सुपरमोडल पनि हुन् । उनी फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपनि निकोलस् सार्काेजीकी तेस्रो पत्नी हुन् । आमश्रोताले उनका गीत नसुने पनि नेपाली संगीतकर्मीमाझ कार्ला परिचित छिन् । ‘केल्क्याँ…’ सन् २००२ मा सार्वजनिक भएको थियो । शब्द एकातिर पन्छाउने हो भने पनि यो गीत र ‘इन्स्टाको फोटो…’ सुन्दा उस्ताउस्तै लाग्छ । यद्यपी कतिपय यसलाई चोरिएको भन्न नमिल्ने बताएका छन् । संगीत क्षेत्रकै दिग्गजहरु कपी गरिएको दाबी गर्छन् । तीनैमध्यका एक हुन्, चर्चित पपगायक संजय श्रेष्ठ । ‘माया मेरो माया….’ का यी गायक भन्छन्, ‘कर्ड प्रग्रेसन र मेलोडी स्टाईल मिल्छ । त्यसैले यो गीत चोरिएकै हो ।’ यो वास्तविकता बाहिरिएसँगै सामाजिक सञ्जालमा बाँस्कोटाको चर्को आलोचना भएको छ ।
तर बाँस्कोटा मौन छन् । खासमा नेपाल आइडल सिजन २ सकिएको केही दिनमै उनी अमेरिका उडेका थिए । ‘इन्स्टाको फोटो… आउँदा पनि उनी उतै थिए । अहिले पनि उतै छन् । फोन सम्पर्कमा बाँस्कोटाले ‘कपी’ वा ‘चोरी’ शब्द त प्रयोग गरेनन् । यत्ति स्विकारे, ‘हो, म कार्लाको गीतबाट धेरै प्रभावित भएको छु ।’
बाँस्कोटालाई एकजना दाइले त्यो गीत सुनाएका रहेछन् । अर्थ नबुझे पनि उनलाई मेलोडी मन परेछ । पछि त्यही दाइको माध्यमबाट थाहाँ पाएछन् यसको मुख्य लाइनले ‘तिमी मलाई अझै माया गर्छौ’ भन्ने अर्थ दिन्छ । बाँस्कोटा भन्छन्, ‘मेरो गीतको शब्दमा यही एउटा लाइन मिल्छ अरु मिल्दैन ।’ इन्स्टाको फोटो… कम्पोज गर्दा उनको दिमागमा त्यही गीत खेलिरहेको थियो । त्यसैले त्यसको चर्को प्रभावबाट बच्न सकेनन् । उनी थप्छन्, ‘कम्पोज गरेर साथीहरुलाई सुनाएँ । उनीहरुले मिल्दैन, केहि फरक पर्दैन भने । सायद त्यो बेला म ‘मिस गाइड’ भएँ ।’ तर उनको व्यथा आफैमा तर्कसंगत छैन । कारण उनी जस्ता गुनेचुनेका संगीतकारलाई लय मिले/नमिलेको आफै थाहाँ हुन्छ/हुनुपर्छ ।
बाँस्कोटा प्रति ‘सफ्ट कर्नर’ राख्न सकिने एउटा बहाना मिलेको छ । त्यो भनेको, उनमा गल्तीको बोध छ । भन्छन्, ‘मैले कम्तिमा कार्ला ब्रुर्नीको गीतबाट प्रभावित भनेर क्रेडिट दिनु पथ्र्यो । तर दिइनँ । त्यसमा मैले इमान्दारिता देखाउन नसकेकै हो ।’ यति गरेको हुँदो हो त अहिले गीत हिट भइरहँदा विवादमा फसेर तनाव झेल्नु पर्थेन, खुशियाली मनाउने माहोल मिल्थ्यो ।’
छुटाउनै नहुने अर्को एउटा प्रसंग बाँस्कोटाप्रति संगीतप्रेमी आक्रोशित हुनुको कारण ‘इन्स्टाको फोटो…’ विवादमात्र होइन । यसअघि पनि उनले गीत कपी गरेका थिए । जस्तोः ‘मन्जरी’ फिल्मको ‘मन यो मेरो हजुर…’ गीत सुन्नुहोस्, हिन्दी फिल्म ‘शो इन सिटी’ को ‘सैबो..’सँग हुबहु मिल्छ । त्यति बेला उनले अब यस्तो हुँदैन भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर त्यसपछि पनि त्यो प्रवृत्ति त्यागेनन् ।
उनको अर्को हिट गीत ‘ठमेल बजार…’ पनि विवादमुक्त हुन सकेन । अघिल्लो वर्ष फिल्म ‘डमरुको डन्डीबियो’ का लागि ‘तितेपाती तितेपाती…’ कम्पोज गरे । तर त्यसलाई आफ्नो गीतबाट कपी गरिएको आरोप लगाए, अर्का गायक प्रकाश पौडेलले । उनका अनुसार ‘तितेपाती तितेपाती’ बोलको गीत २०५७ सालमा रेकर्ड भएर अर्को वर्ष नै सार्वजनिक भएको थियो ।
एकातिर गायक बाँस्कोटा हिट छन् अर्कातिर बारम्बार चोरिको आरोप खेप्नुपरेको छ । चर्चाको लालसा र बजारको माग थेक्न नसकेर सिर्जना र साधनाभन्दा तानतुन पार्ने ‘सजिलो बाटो’ मा रमाउन थालेका त होइनन् ? कान्तिपुर साप्ताहिकबाट साभार
आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै २ दर्जन कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता
विप्लवमाथि वार्ताको ‘दबाब’